कहिलेकाहीँ तपाईले सोच्नुहुन्छ कि शीर्षक सबै यो भन्छ, यसले मौलिक रूपमा समावेश गर्दछ जुन तपाईलाई खेल्नको लागी स्लॉट गेम बारे जान्न आवश्यक छ। तपाईं केहि अवसरोंमा सही हुन सक्नुहुनेछ, तर यो त्यसो गर्दा तपाईं यो गलत हुनेछ।
ग्लेडिएटरहरू एउटा हो Endorphina प्राचीन रोम मा क्षेत्र को महान योद्धाहरु द्वारा प्रेरित खेल, जुन अब सम्म कुनै पनि सजिलै संग अनुमान गरेको हुन सक्छ। तपाईं पनि सम्भव छ कि योद्धाहरू मानव जाति हुन् भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ।
तर कुरा यो हो कि यो समय माछा, तिनीहरू माछा हुन्। स्पष्ट छ!
शक्तिशाली माछाहरू ग्लेडिएटरहरू युद्धका लागि तयार छन्
हो, माछा ग्लेडिय्याटरहरू निश्चित रूपमा एक कुरा हुन् र तपाईं समुद्रको योद्धाको रूपमा आफ्नो क्षमता कम गर्न मूर्ख हुनेछ। त्यसोभए, ग्लेडियटरहरू ढुङ्गा ब्लीचर्सहरूसँग पूर्णतया पानीको पानीमा राख्छन् तर यस समयमा दर्शकहरूबाट अलग रहन्छन्। सम्पूर्ण पृष्ठभूमिमा हल्का नीलोमा छायाँिएको छ, आदेश बटनको साथ। विषयवस्तु एकदम वर्दी हो र सम्भवतः अन्य Endorphina सृष्टिहरु जस्तै विस्तृत रूपमा विस्तृत छैन ब्लास्ट बूम बंग.
संगीत एक नायक जस्तै छ जुन तपाईं मा कल्पना गर्नुहुनेछ ग्लेडिएटरशुरुवात उत्पादन, खेल एक मजेदार र महाकाव्य भावना दे, जो मुख्य अभिनेताहरु वास्तवमा माछा माछा पछि देखि हास्यपूर्ण छ।
र यदि तपाईं पहिले नै भिएल शार्क र मनपराएका ठूला प्राणीहरूलाई चित्रण गर्दै हुनुहुन्छ भने, फेरि सोच्नुहोस्। हामी बाइट आकारको माछा संग काम गर्दैछौ, केहि इच्छाहरु तपाईको जीवनको केहि बिन्दुमा तपाईंको प्लेट मा सम्भव छ। अब स्पष्ट छ कि ग्लेडियटरहरू खेल्न एकदमै रमाईलो खेल हुन जाँदैछ।
लोभी goblins मोबाइल
रील उनको ठूलो बक्स मा
ग्लेडिएटर खरिद अपडेट गरिएको: जनवरी 18, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 ग्लेडिएटर खरिद
2.0.0.1 108 नायक गुणक भाग्य
2.0.0.2 लोभी goblins मोबाइल
2.0.0.4 भेनिसको मन
2.0.0.5 रील उनको ठूलो बक्स मा
2.0.0.6 ठूलो 88
2.0.0.7 मेंढक ग्रोच
2.0.0.8 ज्याक बाघ